ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒေါ်စုကြည်၊ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ကျွန်တော် အမြင်
အလှည့်အပြောင်းတခုကို မျိုးမြန်မာ မျက်ခြေပြတ်သွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူ့ ယောကျာင်္းသေမဲ့အချိန်
အစိုးရက သူ့ယောကျာင်္းအတွက်visa ငြင်းပြီး
သူကယောကျာင်္း နဲ မြန်မာ့နိုင်ငံ ၂ ခုအပြိုင်မှာရွေးချယ်လိုက်တဲ့
အချိန်ကစပြီး အစိုးရရှုံးပြီး သူနိုင်သွားပါတယ်။
အဲဒီ့ အချိန်ကနအဖ ဟာတမျိုးစဉ်းစားလုပ်ဆောင်ခဲ့
သူ့ယောက်ျားက သေသွားမှတော့ visa လိုသေးလားဗျ . ဟိုက သေသွားတာ ပြန်ရှင်လာတာမှ မဟုတ်တာ . ( ဒီတော့ ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ့်ဟာကိုသူလုပ်တာပေါ့ ဗျ ) . ဒါလေးတောင် မစဉ်းစားမိဘူးလား ဗျ. ( ဟိုနိုင်ငံကိုပြန်သွားလဲ သူက သား၂ ယောက် မုဆိုးမ အမေ ဖြစ်မှာလေ. )